Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Arsenal oo si kulul u weeraray Mesut Ozil – Gool FM
(Arsenal) 15 Jan 2019. Halyayga kooxda Arsenal ee Paul Mariner ayaa wuxuu weerar ku qaaday Mesut Ozil, isagoo sheegay inaysan jirin wax ilaa iyo haatan la sheegi karo uu ka qabtay Gunners mudadda uu ku sugnaa Emirates Stadium.
30 jirkan ayaa ka maqnaa liiska xidigaha kooxda Arsenal uu soo xushay Unai Emery kulamadii yaraa lasoo dhaafay ay ciyaartay kooxda Arsenal, taasoo keentay muran xoogan ee ka dhex jira kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London.
Hadaba halyayga Paul Mariner oo ka hadlayay aragtidiisa kaga aadan Mesut Ozil ayaa wuxuu yiri:
“Ma aqoono sababta ay kooxda Arsenal ugu ogolaatay Alexis Sanchez inuu baxo, marka aan aadi jiray kulamada kooxda Arsenal, si aan u daawado ciyartiisa wuxuu ahaa Sanchez mid cajiib ah”.
“Ma uusan kasoo muuqan kooxda Manchester United kulamo badan, laakiin waxay u ogolaadeen Sanchez inuu baxo, hadana waxay doonayaan in Aaron Ramsey uu beeca xurta ah ku baxo, ma aqaano waxa dhacaya”.
“Arinta Mesut Ozil, waxaa jira wax lala yaabo, anagana ma naqaano, Arsenal waxay u ogolaatay Ozil inuu qandaraaska u kordhiyo, haa way dhacday, balse muxuu ilaa iyo haatan u qabtay kooxda? Ma jiraan wax uu u qabtay, wax walba waa eber”.
“Haa, isga waa ciyaaryahan cajiib ah, balse waa inuu taam noqdaa, marna ma fiicna awoodiisa jir ahaaneed, wax uun ayaa jira, balse ma naqaano waxa helay wiilkan yar”.
“Sergio Aguero waa ciyaaryahan aad u fiican, wax badan ayuu iga caawiyaa”